Robinhood vs Acorns: Sharci ama Fadeexad | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | 2022
Bogga ugu weyn Robinhood vs Acorns: Sharci ama Fadeexad | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | 2022
Haddii aad rabto inaad bilowdo isku-darka maal-gashiga nolol-maalmeedkaaga iyadoo inta badan si otomaatig ah adiga laguugu sameeyo, markaa barnaamij qabow oo maal-gashan oo yar sida Acorns ayaa ah ikhtiyaar weyn oo la isku dayo. Dhanka kale, haddii aad rabto inaad gacanta ku dhigto maalgashiga dhabta ah sida ganacsiga saamiyada, ETF -yada iyo cryptocurrencies, xulashadaada saxda ah waa inay noqotaa Robinhood.
Maqaalkan, waxaan ku dhejin doonnaa labada barnaamij ganacsi oo dhinac ah. In kasta oo Acorns lagu yaqaan dib -u -habaynta iyo siinta qiimo badan isbeddelkaas yar ee aad dareento inuusan lahayn wax qiimo ah, Robinhood wuxuu ku siinayaa qiime iyada oo laga ganacsado saamiyada, ETF -yada, iyo cryptocurrencies. Waa Robinhood vs Acorns!
Robin filimkii caanka ahaa ee 'Robin Hood' wuxuu aad u danaynayey inuu ka ilaaliyo gacaliyahiisa, 'Maid Marian' wax kasta oo uu dareemay inuu awood u leeyahay inuu waxyeello geysto. Miyuu waxyaalahan oo dhan samayn doonaa haddii uusan waligiis u malaynaynin falalkiisa inuu yahay maalgashi dhinaca wanaagsan ah?
Waa hagaag, si fiican ha u lumin, halkan kuma hadlayno filimaan.
Eeg jadwalka hoose si aad u hesho dulmar maqaalkan.
Waa Maxay Robinhood?
Robinhood waa barnaamij ganacsi oo aan lahayn komishan oo kuu oggolaanaya inaad ka ganacsato saamiyada, ETF-yada, xulashooyinka, iyo crypto. Waxay ku habboon tahay kuwa bilowga ah iyo kuwa isku midka ah ee doonaya inay maalgashadaan sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Dillaalintu si ulakac ah ayey aasaas u tahay istcimaalka isticmaalaha cajiibka ah.
App -ka ganacsiga waa 100% komishan la'aan.
App -ku wuxuu kuu sahlayaa oo kugu dhex maraa habka ganacsiga, laakiin ma heli doontid tilmaamo maalgashi.
Sida Loogu Bilaabo Robinhood
Furitaanka koontada Robinhood ma dhidido dhidid Waxaad ku samayn kartaa onlaynka taleefankaaga casriga ah, kiniiniga, ama aaladda kombiyuutarka. Hoos ka eeg tallaabooyinka
Si aad u bilowdo koontadaada, Riix halkan iyo furaha macluumaadkaaga xiriirka iyo faahfaahinta asalka kale ee lagama maarmaanka ah.
Waxaad heli doontaa emayl ogeysiis ah oo leh xiriir kaas oo aad u adeegsan doontid inaad ku bilowdo maalgelin xiddigle.
Si ka duwan aaladaha kale ee maalgashiga, Robinhood ma dalbado lacag caddaan ah si loo furo xisaabta ama loo rogo. Si kastaba ha noqotee, si aad u maalgashato waxaad u baahan tahay ku filan inaad siiso tallaal.
Haddii aadan haysan lacag kugu filan oo aad ku sii wadato, waxaad bilaabi kartaa wax yar intaad ku dhex korayso barnaamijka ganacsiga.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad rabto inaad maal gashato waqtiyo kala duwan, waxaad samayn kartaa dhigashada tooska ah koontadaada bangiga toddobaad kasta, labadii toddobaadba mar, bil kasta ama saddexdii biloodba mar.
Robinhood wuxuu adeegsadaa xaqiijin degdeg ah oo leh bangiyo badan oo sare. Xawaaladaha bangiga oo gaaraya ilaa $ 1,000 ayaa isla markiiba loo heli karaa maal -gashiga, isla sidaas oo kale ayaa ah macaashka illaa $ 1,000 oo ka imanaya iibinta kaydka. Dhigashada ka weyn $ 1,000 waxay qaadan doontaa ilaa shan maalmood oo shaqo si loo hawlgeliyo.
XIRIIRKA LA XIRIIRA: 11 Barnaamijyada Taleefoonka si aad lacag uga hesho mar kasta oo aad u baahato
Waa maxay Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Isticmaalka Robinhood?
Robinhood wuxuu aad ugu habboon yahay dadka cusub ee doonaya inay ka ganacsadaan tiro yar, oo ay ku jiraan saamiyo jajab ah, oo aan u baahnayn wax yar xagga cilmi -baarista oo dhaafsiisan inay arkaan waxa ay kuwa kale ka ganacsadaan.
App-ka iyo mareegaha ayaa adeegsada-saaxiibtinimo leh aadna u sahlan in la isticmaalo oo ku dallacidda komishannada eber waxay soo jiitaan maalgashadayaal aad u qiime badan oo ka ganacsada tiro yar.
Taasi waxay tidhi, bixinnadu aad bay ugu fudud yihiin cilmi -baarista iyo falanqaynta, waxaana jira su’aalo culus oo ku saabsan tayada fulinta ganacsiga iyo meelaha xoogga leh.
Halkan waxaa ah liis ay ku qoran yihiin faa'iidooyinka iyo khasaaraha.
XIDHIIDHKA: 20 Barnaamijyada Sahanka ee bixiya Kaararka Lacagta & Hadiyadda sanadka 2021
Zero-Komishanka ka ganacsada saamiyada, ETF -yada, crypto, iyo xulashooyinka.
Koontada Maaraynta Lacagtu waxay awood u siisaa lacag dadban si ay u hesho dulsaar macno leh.
On Robinhood, way fududahay in la helo dukumentiyada canshuurta iyo macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan koontada.
Aad bay u fududahay in la furo koonto dilaalnimo.
Hel kayd bilaash ah oo qiimahoodu yahay $ 200 markii aad iska diiwaangeliso iskuxirka hoose.
Waxay bixisaa helitaanka cryptocurrency oo ay ku jiraan Bitcoin iyo Ethereum.
App-ka Robinhood waa mid adeegsada-saaxiibtinimo leh.
Helitaanka degdegga ah ee $ 1,000 marka la dhigto.
Saamiyada jajabku waxay u furan yihiin isticmaaleyaal badan.
Dib -u -maalgelinta gunnada waxay kuu oggolaaneysaa inaad kasbato dulsaar isku -dhafan.
Taageerada macmiilka waxaa kaliya oo la heli karaa saacadaha suuqa.
Ganacsiga margin wuxuu u furan yahay xubnaha Gold.
Xaddidnaanta helitaanka agabka waxbarashada.
Helitaanka xaddidan ee warbixinnada cilmi -baarista iyadoon xubin ka ahayn Dahabka.
Robinhood ma bixiso goob ganacsi oo farsamo si loo sameeyo falanqayn.
Robinhoodku Ma Xalaalbaa?
Robinhood waa barnaamij ganacsi oo lacag la'aan ah oo u oggolaanaya maalgashadayaasha inay ka ganacsadaan kaydka, ikhtiyaarrada, lacagaha is-weydaarsiga, iyo cryptocurrency iyagoo aan bixin guddiyada mid kasta oo ka mid ah hoosaadyadeeda; Robinhood Financial, Robinhood Securities, iyo Robinhood Crypto.
Ganacsiga suuq-geynta waxaa la siiyaa macaamiisha is-hagta Robinhood Financial. Robinhood Financial waa xubin ka mid ah Hay'adda Xakamaynta Warshadaha Dhaqaalaha (FINRA).
Robinhood wuxuu kaliya shati u leeyahay inuu ka ganacsado dammaanadaha gudaha United States (US), muwaadiniinta Mareykanka iyo deganeyaasha, mana u oggolaan doono qof kasta oo aan ahayn degane sharci ah oo Mareykan ah inuu iibsado ama ku iibiyo dammaanad iyada oo la adeegsanayo codsigiisa illaa waqtiga loo oggolaaday inuu ku lug yeesho dammaanadaha iyo ganacsiga maalgashiga maamulaha ku habboon ( s) ee xukun shisheeye.
Goobta ganacsiga waxaa hadda diyaar u ah deganayaasha Mareykanka ee sharciga ah ee ka weyn 18 sano jir.
Webka iyo app-ka gacanta ee isticmaalaha ayaa u fiican kuwa cusub inay maalgashadaan kuwaas oo doonaya inay ka ganacsadaan tiro yar, oo ay ku jiraan saamiyo jajab ah, oo aan u baahnayn wax yar xagga cilmi-baarista oo aan ka ahayn inay arkaan waxa ay kuwa kale ka ganacsadaan.
Isku soo wada duuboo, Robinhood wuxuu doonayaa inuu awood siiyo jiilkan cusub si uu u yeesho lahaansho weyn mustaqbalkooda maaliyadeed, taas oo hubaal u horseedi doonta caafimaad, caafimaad adduun oo aad u adag. Guji halkan si aad u hesho diiwaangelin.
Waa Maxay Acorns?
Acorns waa barnaamij maalgashi oo si otomaatig ah u maalgashanaya isbeddelkaaga firaaqada ah. Kharash kasta oo lagu shubo koontadaada bangiga waxaa lagu soo koobayaa ilaa doolarka xiga (Acorns wuxuu ugu yeeraa kuwan “isugeyn”) wuxuuna galiyaa faylal kala duwan. Haddii aad quraac ku iibsato $ 6.25, Acorns waxay ku wareejisaa ilaa $ 7 waxayna ku maalgelisaa farqiga (75 senti).
Adoo isku duwaya isbeddelkaaga oo ilaalinaya farqiga, Acorns waxay maalgelinta u sahlaysaa sida ugu fudud; hase yeeshee, waxay ka qaadaan lacag.
Caadi ahaan, waxay ku kacdaa $ 1 illaa $ 5 bishii si loogu maalgashado iyaga. Halkii aad ka iibsan lahayd kaydka shaqsiyeed, lacagtaada dib ayaa loo maalgelinayaa 1 ee 5 hore loo dhisay dusha sare.
Acorns wuxuu eegaa danaha ugu wanaagsan ee maaliyadeed ee jiilalka soo socda iyo kuwa soo socda ee maalgashadayaasha, isagoo ka faa'iideysanaya xoogga iyo xoojinta tallaabada maalgelinta yar-yar.
Hadda su’aasha xigta waa; sideen ku bilaabayaa Acorns?
Sida Loogu Bilaabo Geedaha
Si aad iskaga diiwaangeliso Acorns, waxaad u baahan tahay riix halkan si aad u samaysato koontadaada kadibna raac talaabooyinka hoose.
Si aad u bilowdo koontadaada, dooro furaha sirta ah oo sii:
Galitaanka bangiga onlaynka ah
Qiyaasta qiimaha saafiga ah
Ku xiro kaararka amaahda ama kaarka bangiga ee aad rabto inaad ku kasbato “wareeg-wareeg”. (Inta badan ama inta aad rabto).
Soo geli da'daada, yoolalka maalgashiga, waqtiga, iyo dulqaadka halista si loo go'aamiyo faylalkaaga ugu habboon.
Iyada oo ku saleysan macluumaadkaaga iyo Aragtida Portfolio -ka Casriga ah, Acorns waxay kuu soo jeedinaysaa faylal -faylal kuu fiican.
Si koontadaadu u shaqeyso, waxaad markaa ku dari kartaa maalgashi bilow ah oo yar $ 5+.
Ugu dambayn, habayn koontadaada adiga oo hagaajinaya wareegyadaada iyo dejinta dhigaalka soo noqnoqda si aad dhaqso ugu kobciso maalgashigaaga.
XIDHIIDHKA: 10 Barnaamijyada Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah 2022 -ka
Waa maxay Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Isticmaalka Qoryaha?
Way fududahay in la maalgashado barnaamijka ganacsiga wuxuu siiyaa ikhtiyaarrada isticmaaleyaasha inay si otomaatig ah uga ganacsadaan maalin kasta, toddobaadle, iyo bille. Tilmaantan mid ayaa ka dhigaysa mid aad u dabacsan. Intaa waxaa sii dheer, madalku wuxuu leeyahay ikhtiyaarro dalab kasta oo la imanaya isbeddel yar oo u baahan.
Taa bedelkeeda, Acorns waxay ka tagtaa adeegsadayaasha ikhtiyaarro maalgashi oo yar. Waxaad lahaan doontaa kaliya 7 fasal oo hanti ah oo aad ka dooran karto. Adeegyada maalgelinta qaarkood waxay faafiyaan qoondaynta hantida in ka badan 10 fasal.
Sida shay kasta oo kale u haysto faa iido iyo khasaare, Acorns waxay leedahay aag ka dhigaysa mid aan cillad lahayn iyo aagag siinaya gees ka sarreeya aaladaha kale ee maalgashiga.
ARAG SIDOO KALE: Acorns app maalgelinta: Sida si fudud looga helo 2022
Acorns waa mid aad u otomaatig ah.
On Acorns, waxaad si fudud ugu maalgashan kartaa isbeddelka firaaqada.
Madalku wuxuu leeyahay ilo waxbarasho oo badan si loo eego macaamiisha si looga caawiyo inay wax bartaan.
Waxaa jira meel loogu talagalay jadwalka maalgalinta maalinlaha ah, toddobaadlaha ah, ama billaha ah.
Waxaad ku kasban kartaa maalgashiyo gunno ah kharashaadka dukaamada qaarkood iyo meheradaha iyada oo loo marayo Lacag La Helay.
Inta lagu guda jiro sameynta koonto, waa inaad doorataa faylalka tacliimeed ee adiga kuu shaqeeya kuna qanciya dulqaadkaaga halista.
Waxaad si sahal ah u dardar gelin kartaa maalgelinta oo leh deebaaji hal mar ah, deebaaji soo noqnoqda, ama isugeyn badan.
Waxaad heli doontaa xisaabaadka hawlgabka ee faa'iidada leh ee canshuurta si aad u maalgashato.
Abuur xisaabaadyo ilaalin si aad u bilowdo kaydinta jiilalka mustaqbalka.
Ku kaalmee meeraha adiga oo beerto geed markaad isqorto madal.
$ 1 ujrada go'an ee Lite iyo $ 3 ujrada go'an ee billaha ah ee shaqsiyeed ayaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo laakiin si weyn ayaa loogu gooyay soo -celinta maalgashiga xisaabaadka yaryar.
Ma heli doontid saamiyo ama maalgashiyo gaar ah.
Isticmaalayaasha badankood waxay dareemaan in astaamaha otomaatiga ee sarreeya uu leeyahay dhammaad xun.
La'aanta helitaanka cilmi -baarista aasaasiga ah ee maalgashiga.
Qorraxdu ma xalaal baa?
Acorns waa madal maalgashi oo diiwaangashan SEC. Adeegyada dallaalnimada waxaa loo dhiibaa macaamiisha La-taliyayaasha Acorns by Acorns Securities, LLC, ganacsade-dilaal-ka diiwaangashan SEC, iyo xubin FINRA. Xubinta SIPC. Xawaaladaha ku jira koontadaada ayaa la ilaaliyay ilaa $ 500,000. Wali shaki ma ku jiraa?
Acorns hadda waxay bixisaa laba adeeg oo cusub, mid u kaydinta hawlgabka oo la yiraahdo Acorns Later, iyo mid kale oo la yiraahdo Acorns Spend, oo ah kaarka deynta oo lagu daray adeegyadooda kale.
Hadafka shirkadu waa inuu ilaaliyo danaha ugu wanaagsan ee maaliyadeed ee soo-socda, oo ka bilaabanaysa tallaabada xoojinta ee maal-gelinta yar.
Isbeddelkaas yar ee aad leedahay ayaa laga yaabaa inuu macnihiisu dhan yahay.
LA XIDHIIDH BADAN: Dib -u -eegista Sawir -qaadaha Portfolio: Aaladda Maal -gelinta ugu Fiican ee Faylalkaaga Wanaagsan
Robinhood vs Acorns: keebaa fiican?
Labada goobood ee maalgashiga iyo ganacsiga labadaba waxay bixiyaan astaamo u gaar ah oo awood u leh inay wax ka beddelaan maaliyaddaada shaqsiyeed iyagoo furaya albaabbada maal-gashiga: Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin kala duwanaanshahooda.
Haddii aad rabto inaad si otomaatig ah u bilowdo maalgashi, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay app-maalgashi yar sida Acrons. App-kan wuxuu bixiyaa astaamo is-beddel oo firaaqo ah oo lacag kuu gelinaya.
XIDHIIDHKA: Maxaan Ku Maalgashan Karaa 100 Doollar? Talada Khubarada ee 2022
Sidoo kale, Acorns, ma dareemi doontid saamaynta ay ku yeelan karto qiimaha maadaama maareynta maareynta ay tahay kaliya $ 1 bishii.
Qofka jeclaan lahaa inuu xakameeyo maalgashigooda, waxaa laga yaabaa inaadan helin ikhtiyaarro aad ku maal gasho kaydka shaqsiyeed, maalgalinta isugeynta iyo isugeynta, ama dammaanadaha Acorns-markaa hadday taasi adiga tahay, Acorns waxay noqon kartaa maya.
Dhinaca kale, haddii aad danaynayso ka ganacsiga saamiyada, maareynta alaabadaada, oo aad rabto wax badan fursadaha maalgashiga, barnaamijka maalgashiga Robinhood wuxuu ku siin doonaa waayo -aragnimo ka sii wanaagsan oo midho dhal leh.
On Robinhood, waxaad ku ganacsan kartaa saamiyada, ETFs, iyo cryptocurrencies. Intaa waxaa sii dheer, Robinhood wuxuu bixiyaa $ 0 xirfadaha saamiyada isagoo jaraya xafiisyada jirka iyo maareynta koontada gacanta.
Ugu dambayn, Acorns wuxuu ku habboon yahay kuwa bilowga ah iyo maal-gashadayaasha “gacmaha ka maqan”, halka Robinhood uu u roon yahay kuwa doonaya kaalin firfircoon oo ku saabsan doorashada maal-gashigooda. In kasta oo ay bixiyaan habayn dheeraad ah, ganacsiga Robinhood gabi ahaanba waa komishan la'aan.
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Robinhood iyo Acorns?
Labada barnaamij ee ganacsi waxay leeyihiin $ 0 oo ah khidmadda ugu yar. On Robinhood, waxaad ka iibsan kartaa kaydka shaqsiyeed, ETFs, iyo cryptocurrency. Dhanka kale, Acorns wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad ku dooran karto 5 faylalka faylalka ku saleysan heerkaaga maaliyadeed iyo dulqaadka halista. Qoraaladan waxaa diyaariyey oo kormeeraya daraasiin khubaro maaliyadeed ah.
Haddii aad rabto inaad bilowdo isku-darka maal-gashiga nolol-maalmeedkaaga iyada oo inta badan si otomaatig ah adiga laguugu sameeyo, markaa barnaamij qabow oo maal-gashan oo yar sida Acorns ayaa ah ikhtiyaar weyn oo la isku dayo. Iyada oo leh astaamaha is-beddelka firaaqada ah ee kuu maalgalinaya lacag, waxaad dareemi doontaa wax yar oo qanjaruufo ah oo aad awoodi kartid inaad si tartiib tartiib ah u kobciso faylalkaaga.
Sidoo kale uma baahnid inaad ka walwasho khidmadaha maareynta sare maadaama Acorns ay ku soo oogto kaliya $ 1 bishii. In kasta oo loogu talagalay qof jeclaan lahaa xakameyn dheeraad ah oo ku saabsan maalgashigooda, ma jirto ikhtiyaar ah in lagu maalgeliyo kaydka shaqsiyeed, is -dhaafsiga iyo maalgelinta tusmada, ama dammaanadda Acorns - markaa haddii taasi adiga tahay, waxaa laga yaabaa inaysan kuu ahayn barnaamijka maalgashiga ugu fiican adiga.
Dhinaca kale, haddii aad xiisaynayso ganacsiga saamiyada iyo maareynta faylalkaaga, oo aad rabto ikhtiyaarro maalgashi oo dheeri ah, markaa barnaamijka maalgashiga Robinhood waxay u badan tahay inuu ku siiyo khibrad ka sii wanaagsan oo midho dhal leh. Waxaad ka dooran kartaa aaladaha maaliyadeed ee kala duwan, oo ay ku jiraan cryptocurrencies, sida caymiska FDIC.
Waxay ku xiran tahay inaad rabto inaad mas'uul noqoto iyo in kale. Haddii aad rabto inaad ka dhisto faylalka tacliimeed meel xoqan oo aad bixiso eber, Robinhood wuxuu kuu oggolaanayaa inaad taas si sax ah u sameyso.
Haddii aad raadinayso xoogaa gacan qabasho ah lacag yar, ama aad ku xun tahay kaydinta lacagta, Acorns waa taam ku habboon.
Barnaamijyadan maal-gelinta yar-yar waa wax qof walba u yaal.
Haddii aad ku cusub tahay ciyaarta oo aan waligeed wax badan badbaadin, Acorns waxay u badan tahay koobkaaga qaxwada. Barnaamijkan maalgashiga wuxuu si otomaatig ah u soo koobayaa oo u maalgeliyaa isbeddelkaaga firaaqada mar kasta oo aad wax iibsaneyso.
Haddii aad tahay maalgaliye xilliyeed oo aad rabto inaad ku ciyaarto agagaarka kaydka shaqsiyeed, ETFs, ama ikhtiyaarada ganacsiga cryptocurrency, Robinhood waa ikhtiyaar fiican. Qaab-dhismeedkeeda ganacsi ee aan komishanka lahayn waxay siisaa hab aad u wanaagsan oo lagu barto qiimeynta saamiyada ama tijaabinta ganacsiga maalinlaha ah.
Fidelity Index Funds| Maxay tahay in aad u maal gashato.
15 Kayd Oo Saliid Ugu Fiican Oo La Iibsan Karo 2022 | Hagaha Maalgashiga
Litecoin ma maalgashi wanaagsan baa?
Litecoin waa mid ka mid ah altcoin-yada ugu caansan waana mid ka mid ah lacagaha crypto ee ugu da'da weyn ee suuqa. Iyadoo…
21 Lacagta ugu Xasiloon ee Cryptocurrency Adduunka Hadda
Haddii aad raadineyso inaad ku maal gasho cryptocurrencies, helida aaladaha ugu xasilloon waxay noqon doontaa waxa ugu caqliga badan…
ETN ma Maalgelin Wacan? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Maalgashadayaal badan ayaa maqlay ETF (Sanduuqa Sarrifka Ganacsiga), kaas oo ah ururinta dammaanadaha si fudud loo ganacsan karo…
Amaahda Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican ee Dhibicda Dhibcaha 2022
8 Siyaabood oo Lacagtaadu kuugu Shaqayn Karto 2022
Qarsoodiga ah in lacag badan la sameeyo ayaa ah in lacagtaada laguugu shaqeeyo. Tani waxay sharraxaysaa sababta…